Dhageyso: Tarsan oo digniin u direy Reer Muqdisho “Wadada Liido iyo Badda dhismayaal kala dhex galo ma ogolin Corniche ayaan ugu talo galney” – idalenews.com
Dhageyso: Tarsan oo digniin u direy Reer Muqdisho “Wadada Liido iyo Badda dhismayaal kala dhex galo ma ogolin Corniche ayaan ugu talo galney”
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Tarsan ayaa maanta mar uu warbaahinta la hadlay waxaa uu sheegay inuu digniin siinayo dadka reer Muqdisho ee dhismaha ka wada xeebta Liido.
Tarsan ayaa sheegay in cidii halkaasi wax ka dhisata waliba waxa laamiga ka xiga bada ay burburin doonaan, sidaasi darteedna aan wax qarash ah la iska gelin dhismayaal waa waweyn oo halkaasi laga dhisto.
‘ Hadhaw inta aad cabaadi laheydeen oo aad dhihi laheydeen hanti ayaa maamulka inaga burburiyo haddaba ka jooga oo dhismayaal halkaasi kama dhisan kartaan” ayuu yiri Tarsan.
Guddoomiyaha waxaa kale oo uu cunaqabateen kusoo rogay dhamaan engineerada dhisa guryaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo uu ku sheegay inay qasab ku tahay inay warqado aqoonsi ah mark ahore kasoo doontaan maamulka Gobolka. Qofkii aan warqadaasi wadana uusan dhisme danbe dhisi doonin.
” Guri danbe oo laga dhisayo haddii qofka dhisayo uusan heysan wax aqoonsi ah oo maamulka gobolka Banaadir ah iyo waliba naqshada gurigasi oo la isla ogolaaday, waxaan ka qaadi doonaa tilaabo burburin ah iyo ganaax” ayuu yiri Gudoomiye Maxamed Tarsan.
Dhinaca kale waxaa uu sheegay Tarsan inay qalabka dabdamiska ay usoo iibiyeen maamulka Gobolka Banaadir xilliga uu Booliska magaaladaasi si toos ah u dhaqan galana ay ku wareejin doonaan qalabkaasi.
Daawo: Ciidamo cusub oo hor leh oo ka socda dalka Kenya oo la geeyey magaalada Kismaayo
Daawo: 23 sano jir Somali Norway oo lagu sheegay inuu ka qeyb ahaa dhacdadii Westgate Mall ee magaalada Nairobi